Ukuphila kanye nempilo yowesifazane
Ezweni lanamuhla, abantu, kanye nabesifazane ikakhulukazi, baye baba sína ngokwengeziwe ngempilo yabo. Into embi ukuthi bacabanga ngakho kuphela uma lezi zinkinga zithinta. Bese baphatha ukwelashwa ngenkuthalo enkulu, futhi bazenzele isibambiso sokuthi okungenani kanye ngonyaka bazothola ucwaningo. Kodwa wonke umuntu uyazi ukuthi udinga ukunakekela impilo yakho kusukela esemncane. Ungaphuzi utshwala, ungabhemi. Amantombazane, lapho ekhetha izingubo, aqondiswe ngobuhle kuphela, kodwa futhi acabange ukuthi lifudumele kanjani.
Ngomzimba wesifazane, kunezinsongo eziningi. Okubi kakhulu: umdlavuza wesibeletho, umdlavuza we-ovaries, umdlavuza webele. Kodwa imvelo yadalwa ukuze ithumele amabellane okuxwayisa. Futhi sizobalalela noma singazinaki, sixazulule ngamunye ngamunye.
Ngokuba isifuba, i-alamu bell kuyinto ukukhathazeka. Ngokwezinga elikhulu lokhu kutholakala kugxila kubesifazane abancancisayo noma abaneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu. Kodwa unyaka ngamunye, amantombazane amancane athola lesi sifo. Ekuqaleni, ukwelashwa akusizi ngalutho. Kunezindlela zokwelashwa kwe-homeopathic. Impendulo yodwa yokwelapha okunjalo, ubude, cishe isigamu sonyaka.
Ukwehla kwesisu somlomo wesibeletho, ngaphandle kokwelashwa okufanele, kungakhula ibe yisigaba somdlavuza. Futhi njengoba izibalo zibonisa, manje ngesifo esinjalo ngisho nabesifazane abangabhalanga baphathwa. Uma kwenzekile ukuthi awuzange uthintane nodokotela ngendlela esifike ngesikhathi, kukhona isisombululo esiyisidalwa senkinga. I-Cauterization yokuguguleka kokushaywa ugesi. Akuyona inqubo emnandi, kodwa isigamu sehora kungasiza ekuqedeni isisu.
I-cyst emaqanda ama-ovari angabuye abe yinhlonipho futhi ayingozi. Ukuze unqume ukuthi uhlolwe kanjani, njengamacala amabili adlule, kuyadingeka ukudlulisa ukuhlolwa, i-puncia. Futhi udokotela ngokuqinisekile uzoqoka ukwelashwa okuphumelelayo.
Lezi zifo ezintathu, hhayi okwamanje umusho. Ngisho noma lesi sifo sinonya, kunezinkambiso eziningi nezidakamizwa ezikulwela kakhulu ukulwa nezifo ezinjalo. Into esemqoka akuyona ukuqala inqubo. Uma i-neoplasm ibonisa ukuthi iyinhlonipho, ungasheshi ukujabula nokukhohlwa ngesimo sakho. "Ama-Nodules" ezinkingeni ze-mammary, ekwakheni kwesibeletho kanye nama-cysts, anezindawo zokukhula, ngakho kufanele uphathe ngokucophelela futhi uqaphele njalo umjozi wakho wezifo ukuze ugweme imiphumela.
Impilo yabesifazane ingcebo efuna ukuvikelwa. Amantombazane amancane kumele anakekele impilo yabo, okungenani ngenxa yomndeni wabo wesikhathi esizayo. Ushada futhi ufuna ukuba nezingane. Futhi izingane ezinempilo zingazalwa kuphela nomfazi onempilo. Njengoba uyazi, amantombazane abhekile ukukhipha isisu, awela ngaphansi kweqembu eliyingozi, futhi kamuva, kungase kube nezinkinga ekukhulelweni kwengane. Ngakho-ke, cabanga ngokucophelela ngaphambi kokunquma ukuqeda ukukhulelwa kwakho.
Kubesifazane abadala, isisusa sabo sokunakekela impilo yabo. Ngokuqinisekile kukhona kakade izingane. Futhi awuzange ucabange ukuthi kuzodingeka bani, uma kukhona uNkulunkulu engakuvimbela, kukhona okuzokwenzeka. Ubekezele, wondla, wakhulisa ingane yakho. Ngempela manje, ngokukhululeka, uphonsa ngesihe sesiphetho. Cabanga ngalokhu ngokufanele. Futhi ngokuqinisekile uzofika esiphethweni sokunakekelwa kwempilo yakho akuyona nje isifiso sobugovu sokuhlala isikhathi eside, kodwa futhi nokuqiniseka kusasa okuzokunika ithuba lokuzihlonipha izihlobo zakho nabangani bakho.
Amadoda athande abesifazane abaphilile. Ukuze uthandeke, kufanele uzibonge. Futhi hhayi ukuletha ukwelashwa, udinga kancane kakhulu. Njalo isigamu sonyaka, kufanele ucwaningwe. Ukuze unikeze konke ukuhlaziya, i-US, futhi kuyisibopho sokuhlolwa ku-gynecologist. Kungcono ukuvimbela lesi sifo kunokuphulukisa. Ukulandela le mithetho elula, uzoqinisekisa impilo ede futhi ejabulisayo.
I-Pharyngitis: izikhambi zabantu
Izakhiwo zokwelapha nokuphikisana kwamakhambi
Ubuhlungu: izindlela zokucwaninga
Indlela yokushaya ngokweqile?
Ingulube idobile ngejusi layo
Amaholide eningizimu enomntwana
Amaphi amadoda angcono kakhulu embhedeni
Ukunakekelwa kwesikhumba nezinwele
Izakhiwo eziwusizo ze-okra
I-pizza ne-zucchini kanye neyibhozi
Ukukhanya okukhazimulayo: indlela yokubuyisa ukubukeka okwenziwe ebusweni emva kwosuku lonke kukhompyutha
I-Blueberry Pie nge-yogurt
Ukuhlinzwa kwepulasitiki ne-cosmetology: "siyoba abangane nemindeni"
I-Horoscope ngo-December 2017 - I-Cancer Yamantombazane - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl